कहाँ गयो सरसफाइबापतको ८३ लाख रुपैयाँ ? « Name of Truth News : News Portal in Nepal
कहाँ गयो सरसफाइबापतको ८३ लाख रुपैयाँ ?
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, २१, बिहीबार २०:१२
मुलुककै पुरानो तथा ऐतिहासिक शहरको रूपमा परिचित राजविराज नगरपालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापनमा करोडौँ बजेट दुरूपयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाको ठूलो रकम सरसफाइमा खर्च भए पनि अपेक्षित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बजेटको दुरूपयोग हुँदै आएको हो ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार प्रत्येक वर्ष सरसफाइ कर्मचारीको ज्यालामा मात्र ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, सफाइका सामान खरिदमा १० लाख रुपैयाँ गरी बर्सेनि ८२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले सोहीअनुसारको सवारी साधन र त्यसमा लाग्ने इन्धन खर्च गर्ने गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा सवारी साधन तथा त्यसमा लाग्ने इन्धन खर्च भने उल्लेख गरिएको छैन ।
नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा करोडौँ रकम सके पनि सरसफाइको अवस्थामा भने सुधार ल्याउन नसकेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
नगरपालिकाभित्र विभिन्न स्थान, सडक पेटी, नाला, घना आवादी क्षेत्रमा अत्यधिक फोहोर देखिन्छ ।
यसका लागि नगरपालिकाले दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई नगरभित्र र बाहिरबाट नगर प्रवेश गर्ने जनताको स्वस्थ जीवनयापन गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरी नगर क्षेत्रलाई स्वच्छ, सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउनुपर्ने भए पनि दुर्गन्धित हुँदै आएकाले बजेटको दुरूपयोग मात्र भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजविराज नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा भएको फोहोर नउठाउँदा बजार दुर्गन्धित हुने गरेको महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल सप्तरीकी अध्यक्ष अनिता देवकोटाले बताइन् । नगरपालिकामा नाला जाम भएर पानीको निकास नहुँदा थप दुर्गन्ध फैलिएको उनको भनाइ छ ।
राजविराज नगरपालिकामा फोहोरसँगै अधिकांश सडक जीर्ण भई सर्वसाधारणलाई आवतजावत समस्या हुँदासमेत नगरपालिका भने मौन बसेको स्थानीय अम्बिका दाहाल बताउँछिन् ।